Inguquko yesithathu yezoRhwebo: Iyintoni, uyilo lwayo kwaye iqale nini | Ezezimali
Njengoko uninzi lwethu sele lwazi, imbali ibhalwe ngeziganeko ezahlukeneyo ezimele utshintsho kumanqanaba amaninzi entlalontle, inkcubeko, ezoqoqosho kunye nezobuchwepheshe. Utshintsho kwimizi-mveliso, umzekelo, lolunye lwezona zaziwayo. Ukungeniswa koomatshini abanzima abenzelwe imveliso ngobuninzi, iifektri kunye nenjini yomphunga zizinto zokuqala eziza engqondweni. Nangona kunjalo, Zizonke zintathu iinguqu kwimizi-mveliso ezichongiweyo, nganye inezobuchwephesha, ulwakhiwo kunye notshintsho kwimarike. Ngapha koko, uguquko lwesithathu lweshishini alukapheli.
Kule nqaku siza kuthetha malunga nokuba yeyiphi na inguquko yesithathu kwezamashishini, xa yaqala kunye notshintsho olwenzileyo. Ngaphandle kwamathandabuzo sisihloko esinomdla kakhulu kwaye Kukulungele ukuzazisa ukuze uqonde ngcono imarike kunye nemarike yemasheya.
1 Luluphi uguquko lwesithathu kwimizi-mveliso?
1.1 Zeziphi ezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo kuhlaziyo lwesithathu lweshishini?
2 Lwenzeka nini uguquko lwesithathu lweshishini?
3 Umhlaba jikelele
Luluphi uguquko lwesithathu kwimizi-mveliso?
Ikwabizwa ngokuba luhlaziyo lobukrelekrele (i-RCT) okanye inguquko yesithathu kwezenzululwazi kunye nezobuchwephesha, uguquko lwesithathu lweshishini lubonisa umbono ovunyiweyo yiPalamente yaseYurophu ngoJuni 2007. Yinguqu kwezoqoqosho apho iinkqubo ezintsha zamandla zidibana kunye neetekhnoloji zonxibelelwano ezintsha.
Ezi ndlela zintsha zonxibelelwano ziphela sele ziziindlela zolawulo kunye nombutho impucuko eyenze yabakho ngenxa yemithombo emitsha yamandla. Kule meko sithetha ngayo umanyano phakathi kwetekhnoloji yonxibelelwano nge-Intanethi kunye namandla ahlaziyiweyo wenkulungwane yama-XNUMX, nto leyo ebangela ukuba kubekho inguquko kumzi-mveliso wesithathu.
Zeziphi ezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo kuhlaziyo lwesithathu lweshishini?
Zininzi izinto ezenziweyo eziye zavela kuhlaziyo lwesithathu lweshishini, ekuthi emva koko kuphuhliswe ezinye izinto, izimvo kunye neetekhnoloji. Umjikelo ongapheliyo apho ukufumanisa ngakunye kukhokelela kumawakawaka ngaphezulu. Isantya apho umntu akhula khona siyothusa. Phakathi kwezinto ezininzi ezenziweyo zotshintsho lwesithathu kwezoshishino ezi zinto zintathu zibonakala ngokukodwa:
Ifayibha yokukhanya: Yindlela yokuhambisa edla ngokusetyenziswa kuthungelwano lwedatha.
Izinto ezintsha kwiNanotechnology
Fibreglass: Yinto ebonakalayo esetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso ezahlukeneyo zorhwebo.
Ngombulelo kwezi zinto zenziweyo kunye nezixhobo, izixhobo ezininzi ezibalulekileyo zekhompyuter zenziwe. Leyo yinxalenye yemihla yethu. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa lonke ixesha siyakwazi ukuhambisa nokudlulisa idatha ngendlela ekhawulezileyo nenempumelelo. Nokuba ukugcinwa kwayo kwenziwa kwizixhobo ezincinci kunye ezincinci.
Lwenzeka nini uguquko lwesithathu lweshishini?
Njengoko unokulindela, bekukho iinguqu ezimbini kwimizi-mveliso ngaphambi kokwenzeka kwesithathu. Ngexesha lokuqala, intengiso yendalo yayiziintsapho ezinkulu kunye nazo zonke iimfuno zabo. Ke, Isiseko seshishini eliyimpumelelo yayiyimveliso yesiriyeli. Oko kukuthi: Imveliso yevolumu enkulu eneentlobo ezincitshisiweyo. Masibone idatha ebalulekileyo ukusukela ngeli xesha:
Iminyaka: 1760 ine1870.
Ilizwe eliphambili: INgilane
Iziseko zophawu: Ukuhamba kunye namajelo.
Itekhnoloji yokusebenza: Izixhobo zoomatshini, oomatshini bempahla eyolukiweyo nayo yonke into enokubangelwa ziinjini zomphunga.
Iziko loqoqosho: Ishishini elincinci neliphakathi.
Emva koko kwafika uguquko lwesibini lweshishini. Kuyo, umxholo wosapho watshintsha kwaye imibutho ijonge usapho lwenyukliya njengemarike yabo yendalo. Le yidatha yokuqaqambisa:
Iminyaka: 1870 ine1970.
Ilizwe eliphambili: EUnited States
Iziseko zophawu: I-Steamboats, i-telegraphs, iifowuni kunye noololiwe.
Itekhnoloji yokusebenza: Injini yokutsha, imveliso yemveliso kunye noomatshini bombane.
Ishishini elincinci neliphakathi liba kwinto yenkxaso yeenkampani ezinkulu.
Okokugqibela kukho inguquko kumzi mveliso wesithathu. Kule minyaka, kugxilwe ekuqwalaselweni ngumntu ngamnye, okwenza Imakethi yendalo yahlulwe kakhulu kwaye ikhethekileyo. Amashishini abonelela ngeentlobo ngeentlobo zeemveliso kunye neenkonzo, kwaye iibhetshi zemveliso zincinci kakhulu. Apha sinempawu ezibalulekileyo:
Amazwe aphambili: IJapan, iUnited States kunye namazwe aseYurophu.
Iziseko zophawu: Iinkqubo zokuhamba ngobuninzi, unxibelelwano ngocingo kunye nothungelwano.
Itekhnoloji yokusebenza: Itekhnoloji yoLwazi, ulawulo lolwazi kunye nokukhula kwe-Microelectronics kunye neenkampani zeenkonzo.
Amashishini amancinci naphakathi ayimfuneko kuzo zonke iinkqubo zokusebenza.
Ukudityaniswa kwehlabathi kusisiseko kuhlaziyo lwesithathu lweshishini. Enkosi kubuchwephesha obutsha, imarike ivulele wonke umntu ngenethiwekhi engenamida yendawo. Ngokufika kwe-intanethi, izithintelo azisekho kwaye abantu bayakwazi ukutsiba ukusuka kwindawo yesazisi okanye yengingqi baye kwiinkcubeko ezininzi okanye kwihlabathi liphela.
Kananjalo isithembiso semisebenzi emitsha siyazalisekiswa ngenxa yexesha ledijithali. Ukusebenza komsebenzi kuququzelelwa kukuvela kwamaqonga akwi-intanethi ngokukodwa ekuqhakamshelaneni nabasebenza ngokukhululekileyo. Nangona kunjalo, zona zisongela ubukho besandla sokwenza oba. Ziyanda iinkampani ezikhetha ukwenza iinkqubo ezithile zemveliso ngelixa abasebenzi babo betyunjelwe kwimisebenzi yobukrelekrele. Ke ngoko, Ngelixa idala imisebenzi emitsha kwelinye icala, itshabalalisa imisebenzi yakudala kwelinye icala.
Utshintsho olusebenzayo kuhlaziyo lwesithathu lweshishini kufuneka luqhubele phambili ngokukhawuleza. Ukuba omnye uwela ngasemva, bonke abanye baya kusokola. Enye yeengxaki eziphambili kukunyamalala kwemisebenzi emininzi, yindlela abantu abahlangabezana ngayo nale ngxaki yentswela-ngqesho. Kuya kuba nzima kakhulu kulo lonke uluntu ukuba lwenze utshintsho olusuka kwimodeli yezoqoqosho esele iqhubeka kangangeminyaka emininzi.
Asekho amathandabuzo malunga notshintsho olubonakalayo kwihlabathi liphela. Ilizwe ngalinye kufuneka lizicwangcise ukuze lingashiywa ngasemva kwinqanaba lobuchwephesha, kodwa basekhona abaninzi abajongana neengxaki ezavela kwiinkulungwane ezidlulileyo. Le meko iyakhathaza kakhulu njengoko inokwandisa ukungalingani. Ilizwe lomntu kufuneka liqwalasele ukusombulula zonke iingxaki eziya kuthi ngokuqinisekileyo zihle kunye nohlaziyo lwesithathu lweshishini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Inguquko yesithathu kwezamashishini
UMarcelino Romas sitsho
Ndavula inkampani elunxwemeni ePanama kwaye ngale ndlela ndikwazile ukukhusela imali yam kwelo rhafu. Ndonwabe kakhulu yile mpumelelo yengxowa-mali yam engxamisekileyo, ngaphandle kokuba imali yam yehliswe.
Uhlahlo-lwabiwo mali olusebenzayo